Golaha Ammaanka ee QM oo Soomaaliya u ballanqaaday wadashaqeyn - Halbeeg News
Golaha Ammaanka ee QM oo Soomaaliya u ballanqaaday wadashaqeyn
NEW YORK(HALBEEG)- Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan albaabadu u xiranyahay oo ay uga hadleen arrimaha Soomaaliya, waxa ay markale hoosta ka xariiqeen sida ururka jamciyadda Qurumaha ka dhexeysa ay uga go’antahay taageerada iyo barbar-istaagg ay u hayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, iyagoo halkooda ka sii wado doona xoojinta hay’adaha dowladda iyo nabad-dhisidda dalka.
Goluhu waxaa uu sidoo kale tilmaamay iney ka xunyihiin go’aanka dowladda ee lagu ceyriyay ergaygooda, hasa ahaatee waxa ay muujiyeen in arrintaasi aaney hakin doonin howsha qaramada midoobay, isagoo goluhu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay wadashaqeynta laba dhinac ee Qaramada Midoobay iyo Soomaaliya.
Xubnaha Golaha Ammaanka oo u muuqday iney ka jawaabayeen hadalkii ergayga Soomaaliya ee Qaramada Midoobay ee ahaa in la ixtiraamo qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya ayaa sheegay in QM ay ka go’antay ixtiraamka madaxbannaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya ayna tahay laba taabtaan.
Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay, ayaa qoraal uu dorraad soo saaray ku aqbalay ceyrintii ergaygiisa isagoo go’aamiyay inuu midkale soo magacaabi doono.
Si kastaba ha ahaatee Golaha ayaa sheegay in sanadka 2019-ku uu yahay sanad aad ugu muhiim ah Soomaaliya, si ay ugaarta ujeeddooyinka qaran ee la higsanayo, sidaa darteedna ugu baaqay wadashaqeyn dhammaan masuuliyiinta Soomaaliyeed si loo hurumariyo siyaasadda oo dib-u-habeyn loogu sameeyo ammaanka dalka.
Jubbaland oo dadka deggan guryaha dowladda ugu baaqday iney isaga baxaan